Clips waa la cusbooneysiiyay iyadoo lagu darayo hagaajinta qoraalka | Wararka IPhone
Clips waa la cusbooneysiiyay iyadoo lagu darayo hagaajinta qoraalka
Ka dib dayactirkii ugu dambeeyay ee websaydhada Apple ay heshay, ka dib markii la xiray saacado kooban, wax caadi ah markii shirkaddu ku darto alaabooyin cusub, raggii ka socday Cupertino ayaa ku daray, marka lagu daro iPad-ka cusub iyo iPhone 7 RED, codsi cusub oo loo yaqaan Clips, codsi ay Apple u muuqato inay rabto inay ku soo booddo oo ay u tartanto Sheekooyinka ee shabakadaha bulshada ugu weyn. In Actualidad iPhone waxaan ku daabacnaa maqaal dhameystiran oo aan ku tusno sida codsigani u shaqeeyo iyo wax kasta oo noo ogolaanaya inaan qabano. Hal bil kadib markii suuqa la gaadhay, barnaamijyada Clips waxay heleen casriyeyntii ugu horreysay oo lagu daro hagaajinta qoraalka iyo sidoo kale isbadalada kale ee hawlgalka.
Muuqaaladda waxaan ku abuuri karnaa fiidiyowyo qosol leh oo aan kula wadaagi karnaa asxaabteena ama qoyskeenna. Xoogaa qasabado ayaan ku abuuri karnaa farriimo fiidiyoow ah oo sheekooyin uga sheekaynaya mahadcelinta qoraallada xaragada leh, emojis-yada, sawirada iyo muusikada aan ku dari karno curintayada. Qaar badan ayaa ah dadka isticmaala waxay muujiyeen raaxo-darradooda Markaad tafatirayso qoraallada fiidiyowyada, wax-ka-beddel lama sameyn karin inta fiidiyowgu ciyaarayo, laakiin mahadsanid cusboonaysiintaan ugu horreysa hadda waan sameyn karnaa.
Qaabka aan ula wadaagno abuurnimadeena sidoo kale waa la hagaajiyay, maadaama arjiga Clips uu noo ogolaanayo wuxuu kuu soo jeedin doonaa cinwaanka aan u isticmaalno si joogto ah si aan ula wadaagno abuurkeena. Sida ay horumariyayaashu oo dhan sameeyaan, Apple waxay ka faa'iideysatay soo bandhigida cusbooneysiintan si loo hagaajiyo xasilloonida barnaamijka iyo sidoo kale isku halaynta marka la duubayo lana wadaagayo fiidiyowyo fiidiyoow ah oo ay ku jiraan boorar gaar ah.
Clips waa barnaamij bilaash ah oo laga heli karo soo dejinta App Store, codsi ku habboon oo keliya qalabka 64-bit, sidaa darteed iPhone 5 iyo 5c, aaladaha ay maamusho IOS 10.3 (shuruud kale oo codsi ah) ma lahan ikhtiyaar ay ku soo dejistaan ​​kuna adeegsadaan arjiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Clips waa la cusbooneysiiyay iyadoo lagu darayo hagaajinta qoraalka
Tani waxay noqon kartaa "Aagga Shaqeynta" ee "iPhone 8 oo leh iOS 11
WhatsApp hoos? Tani waa waxa aan ognahay